IRAN: oo siyaasada Maraykanka ee Bariga Dhexe ku tilmaamtay “Jaahilnimo” - Wargane News
Home Somali News IRAN: oo siyaasada Maraykanka ee Bariga Dhexe ku tilmaamtay “Jaahilnimo”
IRAN: oo siyaasada Maraykanka ee Bariga Dhexe ku tilmaamtay “Jaahilnimo”
Madaxweynaha IRAN Xassan Rouhani ayaa si adag uga jawaabay eedeynta uga timid Maraykanka iyo Sacuudiga shirkii ka dhacay magaalada Riyad.
Xassan Rouhani oo todobaadkan markale ku guuleystay Doorashada Madaxweynaha ayaa ku tilmaamay siyaasada Maraykanka ee ku aadan Bariga Dhexe mid ay ku dheehantahay Jaahilnimo Maraykanka ka heysata taariikhda iyo marxalada ka jirta gobalkaasi.
Rouhani ayaa sheegay in IRAN la’aanteed aan la gaari karin wax nabad ama Xasilooni ah oo ka dhalata Bariga Dhexe.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa shirkii ka dhacay magaalada Riyad oo ay ka qeyb galeen inta badan dalalka Carabta iyo Islaamka ayaa ka codsaday wadamadaasi inay iska kaashadaan la dagaalanka kooxaha xagjirka ah, waxayna si gaar ah u cambaareeyeen dowlada IRAN oo ay ku tilmaameen mid iyadu maalgelisa kooxaha Argagaxisada ah.
Hase yeeshee Rouhani ayaa arrintan uga jawaabay in Maraykanka iyo Sacuudiga ay iyagu yihiin kuwa argagaxisada maalgeliya.
“…Is weydiiya yaa la dagaalamay argagaxisada sida Daacish?. Cida la dagaalantay waa la yaqaan waana IRAN, Syria, Xisbullah iyo Ruushka. Is weydiiya yaa maalgeliyey argagaxisada? Ma dhici karto kuwii argagaxisada maalgeliyey inay ku hadaaqaan inay iyagu la dagaalamayaan kooxahaasi…” ayuu yiri Xassan Rouhani oo shir jaraa’iid isniintii shalay ku qabtay magaalada Tehran.
Maraykanka iyo dalalka Carabta ayaa IRAN ku eedeeyey inay taageero siiso kooxaha dagaalada ka wada wadamada Carabta sida; Siiriya, Ciraaq, Lubnaan iyo Yemen. IRAN ayaa sidoo kale taageerta Xukuumada Bashar Al Assad ee Siiriya oo shacabkeeda u geysatay gumaad ba’an.
Rouhani oo doorashada IRAN ee sanadkan markii labaad ku guuleystay ayaa doonaya in IRAN uu ka saaro go’adoonka siyaasadeed iyo dhaqaale oo ay ku jirto. Wuxuuna sheegay in Maraykanka uusan si fiican u fahansaneyn waxa ka jira Bariga Dhexe isla markaana kuwa talada siiya ay been u sheegaan.
“…Maraykanka marar badan ayuu siyaabo kala duwan isugu dayey inuu cadaadiyo IRAN, balse mar walba waa uu ku fashilay arrintaasi, waxaana ka sugeynaa xukuumada cusub ee Maraykanka inay la timaado siyaadad cusub oo macquul ah..” ayuu yiri Madaxweynaha IRAN oo ku tilmaamay shirkii ka dhacay Riyad “Ruwaayad Siyaasadeed” balse aan wax natiijo dhab ama saameyn dhab ah ku yeelan doonin xaalada gobalka ka jirta.
Wargane Tv: Gudoomiyaha Kaanbeynka Gobolka MaroodiJeex Oo U Mahadnaqay Taageerayaasha KULMIYE
War Deg Deg Ah: Madaxweyne Farmaajo Oo Ciidamo Iyo Diyaaradaha Dagaalka Ku Soo Wareejiyey Maamulka Puntland Iyo Dagaalo Culus Oo Ka Istaadhmi Doona Bariga Somaliland
Somaliland: Xisbiga WADDANI oo Somaliland ka Bilaabay Olole Siyaasadeed oo ay ugu Adeegayaan Dawladda Soomaaliya
Somaliland: “Kulmiye (Muuse) Wuu Burburiyay, UCID-na Haddaa Laysku Jiraa, Haduu…”